Ukwenza ama-pellets wezilwane ezifuywayo nge-mothed ehlukile kusetshenziswa imitha yokudla ye-pellet
Lapho sithi izinkukhu nokudla kwemfuyo, akuchazi inkukhu noma ingulube kuphela. Ungenza okuphakelayo abanye okufana ne-turkey, idada, goose, inkomo njl .Ingxenye enkulu yezindleko zebhizinisi lokukhiqiza izinkukhu wukuphakela. Ngakho-ke ukuthi ungenza kanjani ukudla okufanele ngokwakho ,lokho kuzosiza umlimi wenkukhu ukuthi onge izindleko eziningi .
Utshani belayisi, umvini wamazambane omnandi, utshani, bangu, imifino, utshani, njll. kumele inqunywe izingcezu ngaphambi kokuphakela emfuyweni. Utshani bezinkomo kufanele busikwe kuwo 2-3 cm, imifino yezingulube kufanele inqunywe 1-2 cm, nomvini wamazambane omnandi kufanele wenziwe ube 1 cm noma kunjalo. Ngenjwayelo, kungcono ukusika kube amafushane futhi kungabi yinde.ukulungele ukugaya kwezilwane.
Okomhluzi,okusanhlamvu, amazambane amnandi nekhokhasi njengoba okuphakelayo kufanele kufafazwe kuphinde kudliwe ukuze kusize ukugaya. Izinga le-pulverization kufanele linqunywe ngokuya ngemfuyo nenkukhu. Ukudla kwezingulube nezinkomo kungachotshozwa kube izinhlayiya eziphakathi nendawo noma ezi-coarser ze-1 ~ 2 millimeter; Ukudla kwenkukhu kufanele kugayiwe i-ti okusanhlamvu. Ubhatata namadumbula angagawulwa abe yizicucwana bese zomiswa bese zichotshozwa.isando somgodi uzokwenza umsebenzi omuhle wokugaya ,ingagaya Izinhlobo ezahlukene zezinto zokusetshenziswa , njengokolweni, ummbila, irayisi, ubhontshisi, umhluzi, amabele noma ezinye izinto eziqinile njengethambo, inyama eyomile nokunye.Usayizi wokugcina wezinto zokwakha ungalawulwa ngokufaka isikrini esinemigodi eyahlukene ngosayizi
Ngokugcina isikhathi eside,i-silage izoba yisinqumo esihle. I-silage igcinwe emiphongolweni ehlukahlukene, amachibi kanye nevaps.it kuzothuthukisa izimo ze-anaerobic ukukhiqiza i-lactic acid. Kungaba nesiqiniseko sokuthi izakhamzimba ezisezondweni eziluhlaza futhi zithuthukise ukusetshenziswa kanye nokugaya ukudla okuluhlaza okuluhlaza. ulungisa isikhathi sokuphakelwa okuluhlaza okotshani kanye nokushiswa okungaphezulu kwesizini kanye nokushoda.
Ukulungiswa kwe-feed pellet ngokwakho ,kungathuthukisa ukusebenza kahle komsebenzi, yehlisa izindleko zokuphakelwa futhi ukhuphule inzuzo yabasebenzisi. Ayikwazi ukucindezela kuphela ama-pellet okuphakelwa izinkomo nezimvu, kepha futhi sisebenzisa ama-feed pellets ezingulube, izinkukhu namadada njll. Lapho wenza ama-feed pellets uwedwa, ungangeza izinto ezahlukahlukene ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene zezilwane, ukuze kuqinisekiswe umsoco ophelele wezilwane kanye nezinkukhu. Ukondla ama-pellet feed kungakhulisa ukudliwa kwezilwane futhi kugweme izilwane ezikhethiwe ukudla, okuyinto efanele ukugaya nokufaka. Kunganciphisa isikhathi sokukhula kwezilwane, Kulula ukuthutha futhi ingagcinwa isigamu sonyaka.
Kwabalimi abancane,ngokuqhathaniswa nepellet yokudla okuthengiswayo emakethe, ukukhetha okuhle ukuthenga i umshini wepellet wokudla, izindleko aziphezulu kodwa futhi zikhiqiza ezazo izifunzo zokudla ngokwezimo ezithile zezilwane.